नियन्त्रित पदार्थ तस्करको नक्कली गर्भवतीको शैलीले प्रहरी चकित ! « गोर्खाली खबर डटकम
नियन्त्रित पदार्थ तस्करको नक्कली गर्भवतीको शैलीले प्रहरी चकित !
२०७७ चैत्र २ गते सोमवार प्रकाशित
काठमाडौं । नियन्त्रित पदार्थ तस्करको एक अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । घटना बाहिरिएसँगै आएको तस्विरले मानिसहरु चकित बनेका छन् । ब्राजिलमा पक्राउ परेकी एउटी आइमाईको तस्कर गर्ने तरिकाले सबैलाई हैरान बनाएको छ ।
त्यहाँ एक महिलाले नक्कली पेट बोकेर नियन्त्रित पदार्थ तस्कर गर्न खोजेकी थिइन् । गर्भवती भएको नाटक गर्दै उक्त महिला रियो दि जेनेरियोको लागि बसमा चढिन् तर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रित पदार्थको बारेमा जानकारी लिन खोजेपछि सबै रहस्य खुलेको हो ।
प्रहरीलाई समेत चकित पार्ने घटनामा उनको पेटमा एक खरबुजा राखिएको थियो । खरबुजापनि यसरी राखिएको थियो कि भित्रको गुदी सबै बाहिर निकालिएको र गुदी रहने ठाउँमा नियन्त्रित पदार्थ राखिएको थियो । जब प्रहरीले त्यसलाई निकाल्यो तब त्यहाँ चारवटा इट्टा आकारको बाकसमा नियन्त्रित पदार्थ फेला परेको हो ।
एक नियन्त्रित पदार्थ ‘पेस्ट’ को रूपमा वर्णन गरिएको, नियन्त्रित पदार्थको तौल चार पाउन्ड भन्दा बढि थियो र साओ पाउलो अधिकारीहरूले सोमबार पक्राउ गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार महिलाले स्वीकार गरिन् कि उनले नियन्त्रित पदार्थ पराग्वेबाट ल्याएकी थिइन् । उनी रियोमा लैजाने योजना बनाउँदै थिइन् ।
गुवारामा पक्राउ परेकी उनलाई प्रहरी चौकीमा लगियो जब उनलाई मोटरसाइकलमा नियालीरहेका प्रहरी टोलीले सोमबार समात्यो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनलाई ब्राजिलियन मेगासिटीमा नियन्त्रित पदार्थ ओसारपसारका लागि ५०० ब्राजिलियन रियल्स, लगभग १०० डलर भुक्तान गर्ने तय गरिएको थियो ।
साओ पाउलोको सैन्य प्रहरीले असफल तस्करी कारवाहीलाई ‘सीमाविना रचनात्मकता’ भनेर वर्णन गर्‍यो । उनीहरूले खरबुजा भेषको तस्विर पनि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । साथै चारवटा नियन्त्रित पदार्थका चित्रहरू पनि सार्वजनिक गरिएको छ । लामो समयदेखि दक्षिण अमेरिकामा अन्यत्रबाट नियन्त्रित पदार्थका लागि बजारका रूपमा देखिएको ब्राजिल पनि हालका वर्षहरूमा युरोपका मुख्य आपूर्तिकर्तामध्ये एक भएको छ ।
ब्राजिलियन सिन्डिकेट्सले पोर्टमा घुसपैठ गरेको र युरोपका लागि पठाइएको कन्टेनर जहाजहरूमा नियन्त्रित पदार्थ पठाएको मानिन्छ, जहाँ बजार १० अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको छ । गिरोहहरू ब्राजिलमा दक्षिण अमेरिकाको अन्यत्रबाट नियन्त्रित पदार्थ ओसारपसार गर्नको लागि प्याराग्वेलाई एक मार्ग स्टेशनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
गायिका समीक्षा अधिकारी र नायक पल शाह ? भावुक हुदै पोखे दुखेसो ! (भिडियो)
सरकारद्वारा साउन ६ गते सार्वजनिक विदाको घोषणा